Depiote Mapar : Nanakorontana tao Toamasina -
AccueilSongandinaDepiote Mapar : Nanakorontana tao Toamasina
Mazava izao fa ny hikorontanan’ny firenena mihitsy no tanjon’ny Mapar raha tarafina tamin’ny zava-niseho tany Toamasina ny sabotsy teo. Efa nahafantatra fa tsy nahazo alalana tany amin’ny tompon’andraiki-panjakana mantsy ireto solombavambahoaka ireto nefa dia nanao amboletra nitondra olona tamin’ilay toerana efa nolazainy fa hanaovana ny hetsika hatrany. Rehefa tsy navelan’ireo mpitandro filaminana niditra tao anatin’ilay efitrano nokasaina nanaovana ilay hitsika ireto olon’i Rajoelina ireto, dia nidina teny andalam-be nihorakoraka erakya ny tanàna. Efa fantatr’izy ireo fa voararan’ny lalàna, ary mahavoasazy ny fitondrana olona midina an-dalambe tsy nahazoana alalana nefa dia mbola notarihin’izy ireo ihany ireo olona nentiny. Rehefa nanjakan’ny tsy fanarahan-dalàna noho izany ity hetsika nokasaina hotanterahina ity, dia nandray ny andraikiny ireo mpitandro filaminana, ary voatery nanapariaka azy ireo tamin’ny alalan’ny baomba mandatsa-dranomaso.
Ny nahagaga dia ireto solombavambahoaka ireto indray no nampiaka-peo rehefa tsy navela nanatanteraka io hetsika tsy nanara-dalàna io. Fihetsika nanarontsaronana sy nentina namitahana ireo mpanara-dia azy ihany anefa io fampiakaram-peo io no tena marina. Sarotra mantsy ny hino hoe ireto mpikambana ao anatin’ny fahefana mpanao lalàna ireto indray no tsy mahafantatra amin’ny antsipirihiny ireo dingana arahina rehefa te hanatanteraka famiram-bahoaka, na ankalamanjana io na anaty efitrano. Fanahi iniana tsotra izao nahafahana namboly korontana noho izany no nataon’ireto mpomba an’i Andry Rajoelina ireto raha ny zava-nitranga tany Toamasina omaly. Tanan’ireto solombavambahoaka ireto sy izay naniraka azy noho izany no tanjony, satria dia nikorontana tokoa ny nitranga tao an-tamponànan’i Toamasina tamin’ny sabotsy teo. Andrasana kosa ny fampiharana ny lalàna amin’izay ninia nandika izany.